एनआरएनको निर्वाचन आज, कसले मार्ला बाजी? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एनआरएनको निर्वाचन आज, कसले मार्ला बाजी?
असोज २८ । काठमाडौँ, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार निर्वाचन हुँदैछ । पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ भने १० बजेबाट मतदान प्रकृया सुरु हुने छ । संघको नेतृत्वमा वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेसहित तीन जनाको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । अमेरिकाका रतन झा र कतारका टेकबहादुर कार्कीले पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष घलेले दुई बर्षमा गरेको कामको सम्मान गर्दै थप एक कार्यकाल निर्विरोध चयन गर्नुपर्ने माग प्रतिनिधिको छ । प्रतिनिधिको यही दबाबका कारण संघले सहमतिका लागि संरक्षक रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा सहमति समिति गठन गरेर उम्मेदवारसँग सम्बाद गरेको थियो ।
गएराती अबेरसम्म पनि अन्य दुई उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने र घलेलाई निर्विरोध गराउने कोसिस जारी थियो । यद्यपी अहिलेसम्म उनीहरु मध्ये कसैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छैनन् ।
अध्यक्ष घलेले बिश्वभरका गैरआवासीय नेपालीले नेतृत्वको निरन्तरताका लागि दबाब दिएका कारण आफु दोहोरिनुपरेको दाबी गरिरहेका छन् । राष्ट्र पुनःनिर्माणमा साझेदार हुने लक्ष्य राखेको संघले एक हजार निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ नेतृत्वले पाँचवटा जिल्लामा एक हजार स्थायी घर निर्माण गर्ने, गैरआवासीय नेपाली संघका लागि आफ्नै कार्यालय भवन बनाउने, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष संचालन गर्ने लगायतका घोषित लक्ष्य कार्यन्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
आज हुने निर्वाचनले दुई बर्षका लागि अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व चयन गर्ने छ । दुई जना उपाध्यक्षका लागि ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने महासचिवका लागि चार जना प्रतिस्पर्धामा छन् । यसैगरी सचिवमा चार जना र कोषाध्यक्षमा ५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आजैको निर्वाचनमार्फत् ६ वटै क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक र उपसंयोजक तथा महिला संयोजक र युवा संयोजकसमेत चयन हुनेछन् । संघले पहिलोपटक नेतृत्व चयनका लागि नेपालमै बनेको बिद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने भएको छ । जसका कारण मतदान र मतगणना प्रकृया छिटो हुने बताइएको छ । आजै साँझसम्म मत परिणाम आइसक्ने बताइएको छ ।